Izindaba - Izinto Odinga Ukuzazi Nge-Fiber Optic Media Converter
Ngokukhula okulindelekile kwezokuxhumana kwanamuhla, opharetha benethiwekhi kumele bahlangabezane nokwanda okuqhubekayo kokuhamba kwedatha kanye nesidingo esikhulayo sebandwidth ngenkathi besebenzisa ngokugcwele utshalomali kwingqalasizinda ekhona yenethiwekhi. Esikhundleni sokuthuthuka okubizayo nokuphinda kufakwe imicu, ama-fiber optic media converters ahlinzeka ngesixazululo esonga izindleko ngokwelula impilo yekhebuli elihleliwe elikhona. I-fiber optic media converter ingakufinyelela kanjani lokhu? Futhi wazi kangakanani ngakho? Namuhla, le ndatshana izokutshela okuthile nge-fiber optic media converter.
Yini i-Fiber Optic Abezindaba Converter?
Isiguquli semidiya seFiber optic iyidivayisi yenethiwekhi elula ekwazi ukuxhuma izinhlobo ezimbili zemidiya ezihlukene njengokubhangqa okusontekile ne-fiber optic cabling. Umsebenzi wawo ukuguqula isignali kagesi esetshenziswa ekuhlanganiseni ikhebula lenethiwekhi elingashintshiwe (UTP) libe yigagasi elikhanyayo elalisetshenziswa kukhebula le-fiber optic. Futhi isiguquli semidiya se-fiber optic singanweba ibanga lokudlulisa ngaphezu kwe-fiber kuze kufike ku-160 km.
Njengoba ukuxhumana kwe-fiber optic kuguquka ngokushesha, i-fiber optic media converter inikeza ukufuduka okulula, okuguquguqukayo, nokonga kwezomnotho kumanethiwekhi e-fiber-optic asesikhathini esizayo. Manje isetshenziswe kabanzi ezindaweni ezisendlini, ukuxhumeka kwendawo nezinhlelo zokusebenza zezimboni.
Izinhlobo Ezijwayelekile ze-Fiber OI-ptic Media Converter
Abaguquli banamuhla basekela izivumelwano eziningi zokuxhumana zedatha ezibandakanya i-Ethernet, i-PDH E1, i-RS232 / i-RS422 / i-RS485 kanye nezinhlobo eziningi zekhebula ezinjenge-pair esontekile, i-multimode ne-single-mode fiber kanye ne-single-strand fiber optics. Futhi ayatholakala ngemiklamo ehlukene emakethe ngokuya ngamaphrothokholi. Isiguquli semidiya se-Copper-to-fiber, isiguquli semidiya se-fiber-to-fiber kanye nesiguquli semidiya-kuya-fiber siyingxenye yazo kuphela. Nansi isingeniso esifushane kulezi zinhlobo ezijwayelekile zesiguquli semidiya se-fiber optic.
Lapho ibanga phakathi kwamadivayisi wenethiwekhi amabili lidlula ibanga lokudlulisela ikhebula lethusi, ukuxhumana kwe-fiber optic kwenza umehluko omkhulu. Kulokhu, ukuguqulwa kwe-fiber-to-fiber kusetshenziswa abaguquli bezindaba kunika amandla amadivayisi amabili enethiwekhi anezimbobo zethusi ukuxhunywa kumabanga amade nge-fiber optic cabling.
Isiguquli semidiya se-Fiber-to-Fiber singanikeza ukuxhumana phakathi kwemicu yemodi eyodwa ne-multimode, naphakathi kwefayibha embaxambili nefayibha yemodi eyodwa. Ngaphandle kwalokho, basekela ukuguqulwa kusuka kubude obude buye kolunye. Lesi siguquli semidiya senza ukuxhumana okude phakathi kwamanethiwekhi e-fiber ahlukile.
Ama-serial-to-fiber media converters avumela ama-RS232, RS422 noma ama-RS485 amasiginali ukuthi adluliswe kusixhumanisi se-fiber optic. Banikeza isandiso se-fiber yokuxhumeka kwethusi le-serial protocol. Ngaphezu kwalokho, abaguquleli bemidiya ye-serial-to-fiber bangabona isilinganiso se-baud yesignali yamadivayisi we-serial agcwele-duplex axhunyiwe ngokuzenzakalela. Iziguquli ze-RS-485 fiber, i-RS-232 fiber converters kanye ne-RS-422 fiber converters yizinhlobo ezijwayelekile zabaguquli bemidiya ye-serial-to-fiber.
Amathiphu Okukhetha i-Fibre I-Optic Media Converter
Sijwayelene nezinhlobo ezijwayelekile zokuguqula imidiya ye-fiber optic, kepha ukuthi ungayikhetha kanjani efanelekayo namanje akuwona umsebenzi olula. Nawa amanye amathiphu alula okuthi ungasikhetha kanjani isiguquli semidiya se-fiber optic esigculisayo.
1.Kwenza kucace ukuthi ngabe amachips we-fiber optic media converter asekela zombili izinhlelo ezinesigamu-duplex nezisebenza ngokugcwele. Ngoba uma amashipsi wokuguqula imidiya exhasa kuphela uhhafu-duplex system, kungadala ukulahleka kwedatha okungathi sína lapho kufakwa kwezinye izinhlelo ezihlukile.
2.Kwenza kucace ukuthi yiliphi inani ledatha olidingayo. Uma ukhetha isiguquli semidiya se-fiber optic, udinga ukufanisa ijubane labaguquli kuzo zombili izinhlangothi. Uma udinga zombili izivinini, ungathatha izinguquko eziguquguqukayo zemidiya ezimbili.
3.Kwenza kucace ukuthi isiguquli semidiya sihambisana ne-IEEE802.3 ejwayelekile. Uma ingahlangabezani nesilinganiso, kuzoba nezinkinga zokuhambisana ngokuphelele, ezingadala izinkinga ezingadingekile emsebenzini wakho.